Ajnabi ka barbar dagaalama Shabaab oo Sh.Dhexe lagu dilay. – warqaat.com Information About Somali New's Today
HomeWARARKA MAANTAAjnabi ka barbar dagaalama Shabaab oo Sh.Dhexe lagu dilay.
Ajnabi ka barbar dagaalama Shabaab oo Sh.Dhexe lagu dilay.
January 19, 2018 Cabdi nuur WARARKA MAANTA 0
General Maxamuud Maxamed Koronto, Taliyaha Qaybta 27aad ee Ciidanka Xooggga Dalka, ayaa shaaca ka qaaday inay Xoogaga Ururka Al Shabaab ka sifeeyeen wadada dheer ee xiriirisa Degmooyinka Jowhar & Balcad ee Gobolka Shabellaha Dhexe.
Taliyaha, ayaa tilmaamay tani inay ka dambeysay markii ay ciidan xoogan soo dhigeen wadada, isla-markaana ay baacsadeen Shabaabkii soo galay wadadaasi.
Taliyaha oo u waramay Laanta afka Somaliga ee VOA, ayaa waxa uu ku waramaya inaanay xilligan wax dhibaato ahi ka taagnayn isu socodka wadada isu xirta Balcad iyo Jowhar, sida uu yiri.
Taliyaha Qaybta 27aad ee Ciidanka Xoogga Dalka, General Maxamuud Maxamed Koronto waxa uu qiray in mar ay Shabaabku soo buuxiyeen wadada, kuna dhibaateen jireen gaadiidka, balse ay hadda meesha ka saareen dhibaatadaasi.
General Maxamuud Maxamed Koronto, ayaa ballanqaaday inay soo bandhigi doonaan muuqaalo muujinaya sida Shabaabka looga sifeeyay wadada, ayna jooggan Ciidanka Xoogga Dalka oo keliya.
Taliyaha ayaa Qiray iney Shabaab dileen ciidan ku sugnaa Balcad mar ay soo weerareen balse haatan Howlgalka la Xoojiyay.
Waxa uu Sheegay iney dagaal ku dileen Nin kamid ah Ajaanibta ka barbar dagaalanta Xarakada Al-Shabaab oo udhashay Dalka Komoros sida uu sheegayo General Koronro.
Ciidanka Xoogga Dalka oo kaashanaya Ciidamada Maamulka Hirshabelle, ayaa Isniintii qaaday guluf xoogan oo ay Shabaabka kaga kicinayan wadada Jowhar iyo Balcad, waxaana hawlgalkaasi horkacayay Madaxweyne Kuxigeenka Hirshabelle, Cali C/laahi Xuseen (Cali Guudlaawe).
Micheal Keating oo ku baaqay in la xaliyo tabashada laga qabo Shirkii Dhuusa-Mareeb.
43,630 total views, 580 views today
43,630 total views, 580 views today War ka soo baxay Hay’ada Nabadsugida iyo Sirdoonka Qarank ayaa waxaa lagu sheegay in Ciidamada Amniga ay Gacanta ku dhigeen Maxkaxdii ka dambeeyasay weerarkii dadka badan ku dhinteen ee lagu qaaday […]
43,702 total views, 580 views today
43,702 total views, 580 views today Wasaaradda Arrimaha Dastuurka ee Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta qabatay munaasabad lagu daahfurayay Barnaamijka Carabiyaynta Dastuurka KMG ah oo ay ka soo qeybgaleen Wasiir Ku-Xigeenka Arrimaha Dastuurka iyo Safiirka […]
43,716 total views, 580 views today
43,716 total views, 580 views today Wareegto ka soo baxay Xafiiska Madaxweynaha Dowlad-goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam(Madoobe) ayaa Maanta oo Khamiis ah waxaa lagu Magacaabay Hanti dhowraha guud ee Jubbaland Wareegtada ayaa waxaa Hanti dhowrahaGuud ee Jubbaland […]
43,738 total views, 580 views today
43,738 total views, 580 views today Kulan socday in ka badan sideed saacadood ayaa waxa uu Turkiga ku dhexmaray Mas’uuliyiin uu horkacayay Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Soomaaliya Maaxamed Cabdullaahi Salaad(Omaar) iyo Mas’uuliyiinta Shirkadda Favori ee Maamusha Garoonka […]
43,773 total views, 582 views today
43,773 total views, 582 views today Taliye ku xigeenka Ciidamada Booliska Dowlad Goboleedka Galmudug Col, Cabdi Jaamac Cabdulle ayaa shaaciyay in kadib baaritaano ay sameeyeen ay heleen halkii laga soo abaabulay weerarkii lagu qaaday Xarun uu Gaalkacyo […]